မဟာ သကျမာရဇိန် ကျောက်တော်ကြီး မြတ်စွာဘုရား ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များနှင့် ရဟန္တာ ရုပ်ပွားတော်များ - Yangon Media Group
၁၂၂၇ ခုနှစ်တွင် ရတနာပုံမြို့တည်နန်းတည် ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်း တရားကြီး တည်ထားကိုးကွယ် တော်မူခဲ့သော မန္တလေးတောင် ခြေရှိ မဟာသကျမာရဇိန် ကျောက် တော်ကြီးဘုရားနှင့် အာရုံခံ တန် ဆောင်းတော်အတွင်း ကိုးကွယ် တော်မူသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ၊ ခြေတော်ရာဘုရားလေးဆူ၊ စောင်း တန်းကြီးလေးသွယ်အတွင်း တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များနှင့် အသီတိရဟန္တာရုပ်ပွားတော်များအား ဗုဒ္ဓါ ဘိသေကအနေကဇာတင် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ဧပြီ ၂၉ ရက် ကဆုန်လပြည့်နေ့နံနက် ၈ နာရီ ၁ဝ မိနစ်က ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပရ ဝဏ်၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှေးဦးစွာအနေကဇာတင် အခမ်းအနားကို နမောတဿသုံး ကြိမ်ရွတ်ဆိုဘုရားကန်တော့၍ ဖွင့် လှစ်ပြီး မန္တလေးမြို့အတွင်းရှိ ကျောင်းတိုက်ကြီး ၁၁ တိုက်မှ သြ ဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး ၁၁ ပါး နှင့် တကွ သံဃာတော်အရှင်သူ မြတ် ၁၁၅ ပါးတို့က အာရုံခံတန် ဆောင်း၊ စောင်းတန်းလေးသွယ် နှင့် ဂြိုဟ်ပြေနံပြေဘုရားတို့တွင် အသီးသီးသီတင်းသုံးနေရာယူ တော်မူကြပြီး ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေ ကဇာတင်တော်မူကြသည်။
ဆက်လက်၍ မဟာသကျမာ ရဇိန်ကျောက်တော်ကြီးဘုရား အာ ရုံခံတန်ဆောင်းအတွင်း၌ ဗုဒ္ဓဆင်း တုတော်များနှင့် အသီတိရဟန္တာ ရုပ်ပွားတော်များကို လှူဒါန်းခဲ့ကြ သော အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့ကို ရေစက်ချအမျှပေးဝေ ကာ ဆရာတော်ထံမှ ငါးပါးသီလခံ ယူစောင့်ဆောက်တည်ကြပြီး မဟာ သကျမာရဇိန်ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အဂ္ဂမဟာ သီရီသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဒေါက် တာဦးကျော်ဝင်းနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ ဝင်များက ဆရာတော် သံဃာတော် များအား လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဆောင်ရွက် ၍ နန်းရှေ့ခင်မကန်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ထံတွင် လှူဒါန်းမှုအစုစု တို့အတွက် ရေစက်ချအမျှပေးဝေ ခဲ့ကြကာ ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဋ္ဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် ပင့်သံ ဃာ ၁၁၅ ပါးတို့အား အလှူရှင်များနှင့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ကြည်ညိုကြသူများက လှူဖွယ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းများကို လောင်းလှူပူဇော်ခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအား SME Member Card ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကွင်းဆင??
ချင်းပြည်နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ အဆင့်မြင့် ယာဉ်လိုင်းများပြေးဆွဲ၍ ခရီးသွားပြည်သူများ အဆင?
ဂရစ်ဇ်မန်းကို ခေါ်ယူရေးအတွက် ဘာစီလိုနာနှင့် အက်သလက်တီကိုတို့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆွေးနွေးမည်